Siyaasaa – Page 4 – Bilisummaa
ARDUF STATEMENT ARDUF condemns in the strongest terms possible the brutal mass murder purportedly of Oromo pupils of Elementary, Secondary and Universities in four corners …
Why Article 49 (5) of the FDRE Constitution was suspended for the last 20 years? TPLF is not the only force who is pushing the …
Kanneen demokraasii ol kaasanii ilaalanhundi, akka tokkott qayyabachuun saanii mamsiisaa dha. Kanaaf mee qabsaawota Oromoof yoo ilaalcha waloo ni arginaaf tahe haa ilaaluu. Akka ilma …
============ Labsiin Fulbaana 21/2008 caffeen Oromiyaa raggaasise heera sirna federalummaan buluuf ba’e kan diiguu waan ta’eef jabeessinee balaaleffachaa akka haqamu gaafanna ============================================ Mootummoonni habashaa waggoota …
September 22, 2015	6
Gaaffii fi deebii OMN Abbaa Biyyaa Roobaa waliin gaggeesse kan kutaa 4tti qoodamee dhihaate nin hordofe. Abbaa Biyyaa Roobaa qabsoo keessatti nin beeka. Umrii isaa …
‪#‎Saphaloo‬/ Abdulbasit Kedir Abuubakar Muussaa hayyuu ilma sabaa, Daawitii hawaasaaf tahe guyyaa jabaa, Biiftuu bahaan baatee ibsite oromiyaa balloo, Hundeessaafi taligaa hawwisoo afran qalloo, Walaloo …